I-24 / 11 / 2019 | RayHaber | raillynews
[23 / 01 / 2020] IiNdawo zeeBhasi zokufikelela kwiZikhululo zeMarmaray Vuselela iMetrobus	34 Istanbul
[23 / 01 / 2020] Ukukhutshelwa komlilo kwisikhululo saseMarmaray kuphazamiseka	34 Istanbul
[23 / 01 / 2020] Iprojekthi ye-Bursa Railway Project iphinde yavela kwi-Ajenda	16 Bursa
[23 / 01 / 2020] Iinkcukacha zeProjekthi kwabiwa ngazo kwiNtlanganiso yokuKhuthaza iMersin Metro	33 Mersin
[23 / 01 / 2020] I-Ankara Sivas Isantya esiphezulu somgca woololiwe Iindleko ezili-13 zebhiliyoni ye-TL	06 Ankara
Usuku: Novemba 24, 2019
Umzekelo wobuNtshatsheli ovela kuMqhubi weBhasi eMersin
Umzekelo wobuNtshatsheli ovela kuMqhubi weBhasi eMersin; UAziz Oğuz, owayengumqhubi webhasi kuMersin Metropolitan, usayine ibali lobuqhawe. UFaruk Özcan, 63, wayenesifo sentliziyo [More ...]
I-HKMO iphanda ikhampasi ye-TCDD eyabelwe iYunivesithi yaseMedipol
I-HKMO iqhube uphononongo kwiKampasi ye-TCDD ekwabelwelwe kwiYunivesithi yaseMedipol; Isebe le-HKMO Ankara, elifunda kwi-TCDD Campus eyabelwe iYunivesithi yaseMedipol, libhengeze ukuba indawo eyi-50 engamawakawaka emitha yabelwe indawo eMedipol esuka eBirgün [More ...]
Iindlela ezimbini zeSakarya Indlela yoMgaqo weSitayile egqityiweyo!
Iindlela ezimbini ezimiselwe umgca weSyarya System Line !; Ebethetha xa wayetyelele kuMasipala wase Metropolitan weSekarya, Umphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo uMehmet Cahit Turhan uthe, “Sizakuthatha inxaxheba kakhulu kwiiprojekthi zikaSakarya. USakarya ufanele iiprojekthi ezilungileyo kakhulu [More ...]
UMphathiswa u-Ersoy: 'Kukho isifundo malunga nemoto ye-cable kwi-Ihlara Valley'
UMphathiswa wezobuGcisa neNkcubeko, u-Mehmet Nuri Ersoy: kesim kunye ne-Ofisi ye-Cappadocia ye-Ofisi kaMongameli, kukho iqela elivelisa intetho ngokungathi imeko yokhuseleko yale ndawo incitshisiwe. Ngokuqinisekileyo oku akuyonyaniso .. Inkcubeko kunye [More ...]
Iithenda zeHalkapınar zeSikhululo seBhasi esingezantsi kweThenda kungekudala
Iithenda zeHalkapınar zeSikhululo seBhasi esingezantsi kweThenda kungekudala; Umongameli Recep Tayyip Erdoğan uthe kwintetho yakhe e-İzmir: "I-Halkapınar Bus Station Metro imisebenzi iqalile kwaye ithenda izakubanjwa kungekudala." [More ...]
Inxusa le-20 le-Riphabliki yaseTurkey kwi-TÜVASAŞ
I-20 ebekwe eSakarya ngaphakathi kwinqanaba leNgqungquthela yeDiplati yaMazwe ngaMazwe ihlelwe ziingcali eziZimeleyo zoMashishini kunye noMbutho woosomashishini (UMBUHADI) weKomiti yoDibaniso yozakuzo ehambele iT visitedVASAS kunye noonozakuzaku belizwe. Ukubonisa ulonwabo lwabo kutyelelo lwe-TÜVASAŞ [More ...]
I-CHP Kocaeli Isekela lika-Akar Owens Gebze Darıca Subway
Isekela le-CHP likaKocaeli Akar, Kwakhona abaNini beGebze Darica Subway; Ilungu lePalamente yasePalamente yeLungu lePalamente kunye no-PM Haydar Akar, uMasipala wase-Metropolitan weprojekthi yesitayile uvele e-Kocaeli Peacepaper Iphepha laseSebahattin [More ...]
I-TCDD yenyusa Inani labaSebenzi abaKhutshelweyo
Inani labaSebenzi abaKhutshelweyo bandise kwi-TCDD; UMphathiswa wezoThutho kunye neziBonelelo zaseTurhan wabhengeza kunyaka ophelileyo ukuba inani le-2 lamawaka e-800 subcontractors kwi-Turkey State Enterprise Commission lonyuse eli nani kwi-3 iwaka le-447. [More ...]
Iingcali zeengqondo ze-IETT jonga abaqhubi beMetrobus
Iingcali zeengqondo ze-IETT ziqwalasele abaqhubi beMetrobus; Abaqhubi beMetrobus abasebenzela abahlali baseIstanbul 7 usuku lwe-24 iiyure babe neendwendwe ezikhethekileyo kwiindawo zokuphumla. I-psychology ye-IETT ifike ebaleni, ichithe ixesha lokuncokola nabaqhubi. zengqondo, [More ...]
Namhlanje kwimbali: I-24 Novemba 1890 Concession kwi-Bhritane
Imbali Namuhla 24 Novemba I-1890 Concession Umgca weHaifa-Der'a, owawunikezelwa eBritish, wathengiswa kuRhulumente wase-Ottoman.
Namhlanje kwimbali: 24 Januwari 1857 Rumeli Railways
IiNdawo zeeBhasi zokufikelela kwiZikhululo zeMarmaray Vuselela iMetrobus
Ukukhutshelwa komlilo kwisikhululo saseMarmaray kuphazamiseka
ISatifikethi sokuFikelela siSisiwe kuKahramanmaraş Airport
Ukuphathiswa komphathiswa wokungena kukaSakarya omtsha wendlela kunye neprojekthi yendlela ephindwe kabini
Iinjineli zeJiometri Izilumkisa 'Umsele Istanbul Ubangela Izikhukula'
Sivas eseMbindini ekuHambiseni iiWagon zikaZwelonke zeZithuthi
Isidingo seSakarya ayisiyoothutho lweGar, kodwa yiNkqubo yeLoliwe yase-Urban
«	Ja nuwari 2020 »
Isaziso sokuthengwa kwempahla: Iifayile eziNgcwelisiweyo kwiPlatifomu yesithende eUlukışla Yenice Line
NgoJanuwari 24 @ 10: 00 - 11: 00
Isaziso sokuThenga: Ukuthengwa kombane okuSebenzayo kwiNtengiso yasimahla
NgoJanuwari 24 @ 14: 00 - 15: 00
Umnyhadala weqhwa Snowambaşı uza kuqala ngeCawa
IProtocol yoMsebenzi usayiniwe kwiNgqungquthela phakathi kwe-ErÜ kunye ne-Erciyes Aş
Iprojekthi yemoto yeSapanca yemoto iyaqhubekeka ukusuka apho ibisiya khona
UMphathiswa u-Varank udlula emva kweenqwelo zombane zasekhaya
Iprojekthi ye-Ankara Sivas YHT Ukulandela Icandelo loMphathiswa Wezothutho
I-Istanbul Adalar yathunyelwa kwiNkunkuma yokuHwala
Into ebalulekileyo ayikuko ukuvelisa iimoto zasekhaya, kodwa ukuseka inethiwekhi yokuthengisa ngokuchanekileyo
I-TCDD ethengisiweyo yoPhuculo iyaphendulwa! Ukwenza izinto zabucala azisiwo uMcimbi
Iimoto zekhaya zinokuhlaziywa ngaphezulu kwe-Intanethi yokuqhuba ngokuzimeleyo